रोचक / विचित्र Archives - Page 119 of 152 - Medianp.com
रोचक / विचित्र	विभिन्न यौन आसनमा प्लास्टिक ब्याग भित्र के गर्दैछन् यि जोडीहरु (फोटो फिचर)
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन १७, २०७१०६:२० जापान । मानिसका सोख पनि कस्ता कस्ता । देख्दा र सुन्दा जो कोही पनि अचम्ममा पर्छन् । विभिन्न यौन आसनमा युवा र युवती पलाष्टिक ब्याग भित्र भेटीएको यो रोचक प्रसंग हो जापानको । जस्लाई जस्ताको त्यस्तै	पुरा पढ्नुहोस
पत्नी पर पुरुससँग सल्केपछि पतिले गुप्ताङ्ग काटेर खोलामा बगाइदिए
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: शनिबार, फागुन १६, २०७११२:०३ टर्की । पत्नीको वियोगमा रात दिन रुनेहरु धेरै भेटिन्छन् । तर टर्कीका एक बृद्धले श्रीमतीले अर्कैलाई रोजेपछि आफ्नो गुप्ताङ्गलाई आफैले २ टुक्रा पारेर खोलामा फालिदिएको बेलायती पत्रिका मिररले उल्लेख गरेको छ ।
७३ वर्षीय टुरगुटले ७०	पुरा पढ्नुहोस
प्रहरीमा भर्ति हुन अनिवार्य कुमारित्व परीक्षण गर्नैपर्ने
मिडिया एनपी १प्रकाशित मिति: शनिबार, फागुन १६, २०७११०:४८ इण्डोनेसिया । यो अनौठो तथा अत्यासलाग्दो यथार्थ इण्डोनेसियाको हो । प्रहरीमा भर्ति हुनका लागि महिलाहरुले आफ्नो कुमारित्व प्रमाणित गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई निर्वस्त्र पारेर कुमारित्व परिक्षण गरेपछि मात्र उनीहरु प्रहरीका सम्भावित उमेद्धार बन्न पाउँछन् । इण्डोनेसियाको मानव अधिकार	पुरा पढ्नुहोस
माया गरेको अभियोगमा ६ बर्ष बन्धक बनेकी युवती
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बिहिबार, फागुन १४, २०७१०७:४३ एजेन्सी । मायालाई नै अपराध ठान्ने बाबुआमाले आफ्नै प्यारी छोरीलाई ६ बर्ष सम्म बन्द कोठामा थुनेर राख्न सक्छन् भन्दा तपाइलाई पत्यार नलाग्ला । चिनमा एक युवतीलाई प्रेम गरेको सजाय स्वरुप बाबुआमाले ६ बर्ष सम्म बन्द	पुरा पढ्नुहोस
प्रहरीलाई राती भेट्न बोलाएर ‘आई लभ यु’ भनेपछि खोरको बास
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बिहिबार, फागुन १४, २०७१०५:१८ मिडिया एनपी, गोरखा । प्रहरीको १०० नम्बर डायल गरेर कतै जिस्किनु भएको त छैन । यदि त्यस्तो गरिरहनुभएको छ भने होसियार हुनुहोला नत्र तपाई पनि जेल पर्नुहोला । यस्तै घटना घटेको छ गोरखामा । जिल्ला	पुरा पढ्नुहोस
१६०० घण्टा लगाएर तयार गरियो लेडी गागाको ओस्कर ड्रेस !
मिडिया एनपी १प्रकाशित मिति: मङ्गलबार, फागुन १२, २०७११६:३० मिडिया एनपी, लस एन्जलस । पप म्यूजिक जगतकी सनसनीका रूपमा परिचित लेडी गागाले ओस्कर पुरस्कार समारोहमा जुन सेतो रंगको गाउन लगाएकी थिइन, त्यसलाइ बनाउनका लागी १६०० घण्टा लागेको थियो ।
‘एप्लज’ जस्तो हिट गीत दिने गागा	पुरा पढ्नुहोस
नराम्रो तर कहिल्यै लेट नहुने घडी
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, फागुन १२, २०७१०६:३९ टोकियो। सबैको हातहातमा, मोवाइल, ल्यापटप यत्रतत्र सर्वत घडी आफ्नै रफ्तारमा चलीरहेकै छ घडी । तर यि सबै घडीहरु लेट हुने गरेको निष्कर्ष निकालेका छन् जापानका अनुसन्धानकर्ताहरूले । अहिलेका घडीहरुलाई चुनौती दिँदै १६ अर्ब वर्षमा मात्र	पुरा पढ्नुहोस
नौ महीने गर्भवतीले यसरी निलिन तरवार (फोटोफिचर)
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: शनिबार, फागुन ०९, २०७१०५:२१ अमेरीका । तस्विरमा देखिएकी यि महिला ९ महिनाकी गर्भवती हुन् । नौ महीने अवस्था आफैमा गर्भवतीका लागी संवेदनशिल हँदा हुँदै पनि यि महिलाले गरेको कामले जो कोही पनि जिब्रो टोक्छन् । २७ बर्षिया वैरोनिका हरनानडेज	पुरा पढ्नुहोस
यी बालक एकोहोरो खाइ मात्र रहन्छन्, तर कहिल्यै अघाउँदैनन
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन ०८, २०७१०५:४१ जर्मनी । तस्बिरमा देखिएका यी बालक कपाकप खाइ मात्रै रहन्छन् तर कहिल्यै अघाउँदैनन् । सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने यो घटना जर्मनीको हो । केही समय यता सञ्चार माध्याममा छाइरहेका यी खन्चुवा बालक भर्खर तीन वर्ष टेकेका	पुरा पढ्नुहोस
संसारकै पहिलो लिङ्ग सानो बनाउने सर्जरी गरियो !
मिडिया एनपी १प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन ०३, २०७११४:१५ मिडिया एनपी, काठमाडौं । मानिसहरू आफ्नो लिङ्ग सानो भएकोमा चिन्ता गर्दछन तर अमेरिकामा संसारकै यस्तो एउटा अपरेशन गरिएको छ, जसमा एक किशोरको लिङ्ग निकै ठुलो भएकाले त्यसको आकार सानो गरिएको छ । किशोरले यसका लागी	पुरा पढ्नुहोस